June 2020 - Thutasone
“မှေးရပျမွေ သက်ကလမွို့လေးရဲ့ လမျးပွငျတဲ့နရောလေးမှာ ပါဝငျကူညီ လုပျအားပေးနတေဲ့ နမေငျးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ ” ….
“မှေးရပျမွသေက်ကလမွို့လေးရဲ့ လမျးပွငျတဲ့နရောလေးမှာ ပါဝငျကူညီလုပျအားပေးနတေဲ့ နမေငျးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ” ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျသူ မငျးသား နမေငျးကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ နမေငျးကတော့ ဇာတျရုပျတိုငျးအတှကျ သခြောပွငျဆငျမှုတှနေဲ့သာ ကာရိုကျတာကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျတတျသူဖွဈပွီး သဘာဝကတြဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျ.။ . […]
ဒီကောင်မလေးကိုရောသိကြလား???? သူ့သေဆုံးမူအတွက်ကြတော့ရော ဘာလို့ Rip မလုပ်ပေးကြတာလဲ မတရားသေဆုံးရပြီး ဘာလို့ မဝန်းရံကြတာလဲ…… သတ်သေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ….. မယုတ်မာမူကြောင့်သေတဲ့သူမအတွက်ရော စိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြဘူးလား??? မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် တကယ်လေးစားတယ် သူ့ဘာသာသတ်သေတဲ့ သူကျ ဝိုင်းသနားနေလိုက်ကြ share ပြီး rip လုပ်ပေးလိူက်ကြ… ဘာလို့လဲ? ? ဟိုက ရုပ်ချောတယ် လေ. […]
အမှိုက်ပုံရှေ့မှာတဲထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းကို တည်ထောင်ပြီး (၇)ရက်သားသမီးအလှူရှင်တွေနဲ့အတူတူ အလှူအတန်းတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက လက်ရှိမှာလည်း စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားမိသားစုတွေဆီ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက အမှိုက်ပုံရှေ့မှာ တဲထိုးပြီး […]
အသည်းကင်ဆာ နောက်ဆုံး အဆင့်လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေသော ဆေးနည်းလမ်းကောင် အရမ်းသောက် ခဲ့ တဲ့ ညီတစ်ယောက် အခုတော့ အသဲ မှာ အနာဖြစ် လို့ ဆေးရုံ ခဏ ခဏ တက်နေရပြီ။ ဆေးရုံတက် ဆေးစစ် လိုက်တော့ အသဲကင်ဆာ တဲ့ ။ […]
ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မိနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ.. ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မီးနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း အကြောင်းလေး ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဆီးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဆီးပူ ဆီးနီ ဆီးအောင့် ဆီးကျန် ဆီးသွေးပါ ဆီးလမ်းကြောင်း […]
အမည်ပြောင်း၊နေရပ်ပြောင်းအတွက် ၊နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်မှု ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုတော့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရေးအတွက် ခရီးလွန်ယာဉ်စစ် သည့်ရုံးများမှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မစစ်တော့တဲ့အတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အဆင်ပြေကြောင်း သိရှိရ၍ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ယခုအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေး မဖြစ်စေဖို့၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်လာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ပြေလည်စေဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရုံးတွေလည်း လုပ်ငန်းမြန်ဆန်ဖို့ရည်စူးပြီး […]
လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အံ့မခန်းအကျိုးရှိပုံနဲ့ အသုံးဝင်မှုများ (၁)ရှူးဖိနပ်ရဲ့ ပွန်းရာတွေကိုပျောက်အောင်လုပ်နိုင် သွားတိုက်ဆေးဟာ ရှူးဖိနပ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပွန်းရာ၊ပွတ်မိတဲ့အရာတွေ ကို ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို သားရေ ရှူး(leather shoes)တွေမှာ နည်းနည်းညှစ်ထည့်ပြီး နူးညံ့တဲ့အဝတ်စနဲ့ ဖိနပ်ကို ပွတ်တိုက်ပေးပါက ခြစ်ရာ ပွန်းရာတွေပျောက်ပြီး အသစ်အတိုင်းဖြစ် သွားမှာပါ။(leather shoes)တွေကိုသာမက sneaker […]
အိမ်တချို့ရဲ့ အဝင်အဝမှာ ကြည့်မှန်တွေထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းမှန် အိမ်တချို့ရဲ့ အဝင်ပေါက်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြတင်းပေါက်၊ တံခါးတွေ နားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်မှန်တစ်ချပ်ကို ချိတ်ဆွဲထားတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါဟာ အိမ်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကို ပြုပြင်ဖို့ ဆန်းဗေဒင်သဘောအရ ယတြာချေခြင်း တစ်မျိုးပါ။ ဘာလို့ ချိတ်ဆွဲထားသလဲ ဆိုတာကတော့ နေထိုင်တဲ့ […]
Stay at home သတျမှတျ မွို့နယျအားလုံးကို ယခုလကုနျ ဖွလြှေော့ပေးလိုကျပွီ အိမျမှာပဲ နကွေဖို့ ညှနျကွားခကျြထုတျထားတဲ့ မွို့နယျအားလုံးကိုဒီလကုနျမှာ ဖွလြှေော့ပေးလိုကျပွီလို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပွနျ့ပှားတာကို ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ ၂ ပတျတကွိမျ အခွအေနတှေကေို သုံးသပျပွီး၊ ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားရမယျ့ စညျးမဉျြးတှေ၊ […]